Fifidianana ben’ny Tanàna : kaominina 81 amin’ny 1 695 no misy kandidà | NewsMada
Fifidianana ben’ny Tanàna : kaominina 81 amin’ny 1 695 no misy kandidà
“Miisa 81 ny mpirotsa-kofidina ho ben’ny Tanàna manerana an’i Madagasikara, mahakasika kaominina 79. Mbola latsak’izay ny lisitry ny mpirotsa-kofidina ho mpanolotsain’ny Tanàna: 20 ny antontan-taratasy tafapetraka eny anivon’ny Ovec, mahakasika kaominina 18.”
Izay ny fanazavan’ny filoha lefitry ny Ceni, Andriamanantsoa Philbert Hervé, teny Alarobia, omaly, momba ny fametrahana ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina amin’ny fifidianana kaominaly, eny anivon’ny Ovec, hifarana rahampitso amin’ny 5 ora hariva. Amin’ny ankapobeny, somary tratra aoriana ny fahatongavan’izay antontan-taratasy firotsahan-kofidina izay.
Mila hamoraina ny fahazoana taratasy…
Misy antony maromaro izao fahavitsian’ny mpirotsa-kofidina izao, raha ny tatitra voarain’ny Ceni. Eo ny fanangonana ireo taratasy ilaina amin’ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina. “Manamafy izahay eto amin’ny Ceni mba hanamorantsika tomponandraiki-panjakana tsirairay avy izay voakasika amin’ny famoahana ireo singan-taratasy ilaina amin’ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina“, hoy izy.
Anisan’ny voakasik’izany ny eo anivon’ny sampandraharahan’ny hetra, ny rantsa-mangaikan’ny Ceni eo amin’ny fanomezana fisoratana anarana ao anatin’ny lisi-pifidianana. Eo koa ny sampandraharahan’ny fitsarana amin’ny fanomezana ny “cassier judiciaire bulletin n°3“, ny tahirim-bolam-panjakana amin’ny fandraisana ny anto-bola…
Mifampiandry ny mpirotsa-kofidina
Ny antony faharoa, mbola betsaka ireo miandry ny fotoana farany: mijery taratra izay mirotsa-kofidina eny anivon’ny kaominina, ary miandriandry an’izay farany izay. Nefa izahay eto amin’ny Ceni, manamafy fa aleo lavitra apetraka mialoha ny antontan-taratasy firotsahan-kofidina. Amin’izay fotoana izay, moramora kokoa ny fijeren’ny mpikamban’ny Ovec ny antontan-taratasy. Raha sanatria misy tsy mety, mbola afa-manoro hevitra ry zareo. Tsy maintsy averina raha misy tsy mety, ohatra, ny momba ny biletà tokana izay efa nisy maodely efa nomena. Izay no mahatonga ny Ceni manamafy ny tokony handefsana mialoha ny firotsahan-kofidina.